Ampiasain’ny 80%-n’ny mpiompy kisoa : mahavoa ny AVC, tsy mampiteraka, … ny hormôna Confiance (NewsMada) | AEMW
Ampiasain’ny 80%-n’ny mpiompy kisoa : mahavoa ny AVC, tsy mampiteraka, … ny hormôna Confiance (NewsMada)
Fomba ratsy ataon’ny mpiompy omena ny kisoa hatavezina ny fampiasana hormôna Confiance. Mety ho izany ny mampirongatra ny aretina fahatapahan’ny lalan-drà (AVC), vehivavy tsy miteraka eto amintsika ankehitriny.
Efa nanaitra ny sain’ny rehetra tamin’ny fampiasan’ny mpiompy ny hormôna Confiance na Medroxy progesterone acetate (MPA) ny Malagasy matihanina amin’ny fiompiana (MPE), ny taona 2010. Fanafody ho an’ny vehivavy tsy te hiteraka ny MPA, saingy omen’ny mpiompy ny kisoa vavy tiana hatavezina haingana. Nambaran’ny filoha lefitry ny MPE, Rabearivelo Rivo, fa mampiasa azy ity avokoa ny 80%-n’ny mpiompy nanaovana fanadihadiana. Voaporofon’ny fikarohana nataon’ny mpianatra avy eny amin’ny ambaratonga ambony mikasika ny Fambolena sy fiompiana fa misy fiantraikany ratsy amin’ny fahasalaman’ny olombelona ny fanomezana azy ny kisoa. Anisan’izany ny aretina fahatapahan’ny lalandrà ho an’ny lehilahy (AVC), tsy mampiteraka ny vehivavy, mahavery ny fitadidiana ho an’ny olombelona, sns. Aretina saika mateti-pitranga eto amintsika amin’izao fotoana izao avokoa ireo voatanisa ireo. Nandrara ny fampiasana ny MPA ny fanjakana, ny 9 aogositra teo.
Tsy hitsitsy ireo minia mbola mampiasa
Manamafy ny filoha lefitry ny MPE, Rabearivelo Rivo, fa “tsy hitsitsy mihitsy ireo tratra minia mbola mampiasa azy”. Miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy fiompiana, sy ny ao amin’ny Fahasalamana izy ireo amin’ny fanaraha-maso.
Takin’ny MPE ny hananganana haingana laboratoara fitiliana azy eto amintsika, satria mbola any La Réunion no hanaovana izany hatramin’izao.
← Tsy vitan’ny mahery am-boalohany… (NewsMada)
Ambatomirahavavy : lehilahy notondrahana asidra (NewsMada) →